​अलिकति सिर्जनशील बन्दा यसो पनि गर्न सकिन्छ, हामी कहिले बन्छौ सिर्जनशील ?
Thursday, 27 Jul, 2017 9:20 AM
सरकारले केही गरेन त्यो पनि सत्य हो । सरकारमा पुगेकाहरु कसरी कमाउँ भन्नेमै व्यस्त देखिएको पनि बढ्दो भ्रष्टाचारले पुष्टि गरेकै छ । सरकारी कार्यालयहरुमा नियुक्त कर्मचारी काम गर्नेभन्दा काममा कसरी अवरोध सिर्जना गर्ने र कमाउने धन्धामै रहेको सबैको नाङ्गो आँखाले देखिएकै छ ।
तर, हामी सचेत भनिएका जनताचैं यसमा कति दोषी छौ नि ? चोक होस् कि चियापसल यो नेताले केही गरेन । सरकारले त कामै गरेन । यो देशमा बसेर केही पनि हुँदैन । यही होइन अहिलेसम्म गरिरहेको ? तर, अलिकति मात्रै सिर्जशील हुने हो र भने फोहोरबाट पनि मोहोर बनाउन सकिन्छ । नत्र यही उदाहरण मात्रै हेरौं–
कम्बोडियाको राजधानी नोमपेन्हमा हरेक दिन जति फोहोर निस्कन्छ, यूक वान्डीले त्यसबाट केही नयाँ काम गर्ने सोचे । उनको दिमागमा एउटा अनौठो तरिका आयो, त्यही फोहोरबाट विद्यालय बनाउने ।
राजधानी नोमपेन्हको बाहिरी क्षेत्रमा कोह डाख द्वीपमा बनेको छ यो कोकोनट स्कुल । यहाँ पानीको बोतललाई निकै राम्रोसँग काटेर अलगअलग रंगले रङ्ग्याइएको छ। फेरी यसमा कम्बोडियाको झण्डाको आकार दिइएको छ।
भित्ता र भूँइलाई टायलले ढाक्नु निकै महंगो पर्दछ । त्यसो साटो विद्यालयमा खाली भइसकेको बियरको बेकारका बोत्तलको भित्ता सजाइएको छ। भूँइमा त्यही बियरको बोत्तलको बिर्को प्रयोग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरुले पनि यो विद्यालयमा फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोनसम्बन्धी विशेष कक्षा लिने गर्दछन् । र, खेर जाने बस्तुलाई पुनःप्रयोग गर्ने तरिका सिक्छन् । विद्यालयका संस्थापक ऊक भन्छन्–यसबाट विद्यार्थी सिर्जनशील बन्छन् र पर्यावरण पनि सफा रहन्छ ।
विद्यालय सञ्चालक वान्डी विद्यालयबाट कुनै पैसा कमाउँदैनन् उनी आफूले चिनेकाहरुसँग चन्दा लिन्छन् । केही स्थानीय क्याफेले विद्यालयलाई दानका रुपमा प्रयोग गरिएका प्लास्टिकका चम्चा र कप पनि दिन्छन् । जसबाट विद्यालयको छाना छापिएको छ।
बालबालिकाहरुले फूल उमार्ने पनि सिर्जनशील तरिका निकालेका छन् । कोकोनट स्कुलमा पूराना टायरको प्रयोग गरेर रंगीविरंगी कन्टेनर बनाएका छन् । त्यसमा विद्यालयलाई सुन्दर बनाउन फूल लगाइएको छ।
कोकोनट विद्यालयमा कुनै पनि वस्तुलाई खेर फ्याँक्न दिइँदैन । शिक्षक र विद्यार्थी सधैं खेर जाने वस्तुलाई पुनःप्रयोग गर्ने नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहन्छन् । र, ्रत्यस्ता वस्तुलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्न लायक बनाउँछन् ।
विद्यालय निर्माणकर्ता वान्डी भन्छन्–कम्बोडियालाई सफा राख्न र युवाहरुलाई पर्यावरणसम्बन्धी शिक्षा दिन जरुरी छ । जब सबैले यस्ता साना साना कदम चाल्नेछन् र आफू वरपर परिवर्तन ल्याउनेछन् तब यो परिवर्तनले पर्यावरणका साथै जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ ।
नेपाल नयाँ संविधान अनुसार संघीय ढाँचामा गएको छ । त्यसअन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव पनि भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार पनि स्थानीय तहमा पुगेको बताइन्छ । अब हाम्रा स्थानीय तहहरुले आआफ्नो स्थानमा यस्तो सोच अघि सारे देशको मुहार फर्ने समय लाग्ने छैन । देशका आधा स्थानीय तहले मात्रै पनि यसप्रकारको सोच कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश विकासले सिर्जनशील प्रयोगसहित फड्को मार्नेछ । त्यसपछि विकासका लागि न त विदेशीसँग भिख नै माग्नुपर्नेछ न त सरकारले यो गरेन र त्यो गरेन भन्दै आफै विदेशमा जोखिमपूर्ण कामका लागि लाम लाग्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सोचाईमा थोरै सिर्जनशीलताको विकास भने जरुरी छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।